Fampiharana Android ankafizin'i Cristina Torres | Androidsis
Cristina Torres sary placeholder | | Fampiharana Android
Tao amin'ny Androidsis dia nanapa-kevitra ny hilaza amin'ny mpamaky izahay momba ireo rindranasa izay tianay indrindra ny tonian-dahatsoratra amin'ity fizarana vaovao ity. Raha ny tena izy dia maro amin'ireo mpiara-miasa amiko no hanana andianà fampiharana amin'ny findainy izay nanjary tena nilaina sy nampiasaina indrindra, ary ny hevitra dia ny hanolotra ireo izay heverintsika fa hampiavaka antsika ary tsy hiverimberina. Noho io antony io indrindra dia tsy hanazava aminao aho fa ny fampiharana toa Whatsapp, Skype na Gmail. Hifantoka amin'ireo izay tena nampiasako aho fa angamba tsy nohararaotinao ary nahatonga ny findaiko ho fitaovana ilaina amin'ny asa sy fialamboly.
Noho ny asako amin'ny maha freelancer ahy dia misy ny azo antoka fampiharana tsy azoko omena. Amin'ity vondrona ity dia azoko atao ny mampiditra ireo izay mifandraika amin'ny fitantanana ny fandaniako manokana sy ny volako manokana, ary koa ireo izay misy ifandraisany amin'ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miasa sy mpanjifa. Etsy ankilany, ny iray amin'ireo filan'ny foko dia mandeha, ary izany no antony tsy ahafahan'ny telefaonako tsy manana ireo fampiharana manamora ity fialamboly ity. Ka raha te hahalala izay rehetra tazomin'ny Nexus 5 ahy ianao ary manao azy ho mpiara-dia amiko lehibe amin'ireo zavatra roa ireo, dia omeko antsipirihany etsy ambany ireo rindranasa ho an'ny Android ireo raha tsy hiala ao an-trano mihitsy aho ary tsy hijanona ao.
1 Ny fampiharana tsy maintsy hananako
1.2 Sign Easy
Ny fampiharana tsy maintsy hananako
Fintonic | Tehirizo sy ara-bola
Raha ny tena izy, tsy nahy ny fahitana an'ity fampiharana ity, saingy tsy maintsy ekeko fa tsy haiko ny miaina tsy misy azy izao. Tantano ny fandaniam-bola rehetra amin'ny alàlan'ny fanasokajiana azy ireo amin'ny sokajy ary asehoy anao ny lanjanao amin'ny volanao. Ho fantatrao amin'ny fotoana rehetra alehan'ny volanao, satria indraindray ny fihatakatahan'ny vola eny an-tanantsika nefa tsy tsapanao fa fialan-tsiny fotsiny amin'ny tsy fanisana izany araka ny tokony ho izy. Farafaharatsiny, ho ahy, satria fantatro ny Fintonic, dia tsy misy fialan-tsiny mendrika.
Signeasy | Soraty sy Fenoy Docs
Iray amin'ireo rindranasa napetrako tamin'ny telefaona tato ho ato. Mamela ahy hanao sonia nomerika antontan-taratasy hisorohana ny fanaovana scanner azy ireo. Ny marina dia tena azo ampiharina raha manao an'io fomba io amin'ny Internet ianao.
Antso mora vidy MobileVOIP
Na dia nidina be aza ny tahan'ny finday, raha mila miantso firenena hafa ianao, toa ahy, tsy mahasoa anao izany. Noho io antony io, ny findaiko Android dia tsy afaka tsy manana fampiharana ho an'ny antso VOIP. Misy bebe kokoa, fa tamin'izany fotoana izany no taha tsara indrindra amin'ny zavatra notadiaviko.
Efa nilaza ve aho fa mpizaha tany be? Eny, toy izany, ary ireo tia teknolojia, tsy te hahalala na inona na inona momba ny fitondrana taratasy pirinty aho. Noho io antony io dia ananako ny rindranasa rehetra amin'ireo orinasa hiaraka amiko hahafahako mandray ny pasiterako amin'ny Internet. Na dia mamafa ny sasany amin'izy ireo aza aho satria tsy ampiasaina matetika, Ryanair, farafaharatsiny mandritra izao fotoana izao, dia hanohy hiara-hiaina amin'ireo rindranasa sisa ao amin'ny Nexus 5-ko.
Iray amin'ireo fangatahana kintana ho an'ny dia. Ankoatry ny famelana ahy hanao famandrihana tsy ampoizina amin'ny minitra farany dia manome ahy ny fahaizana mitantana ny zava-drehetra avy amin'ny findaiko aho nefa tsy mila manonta taratasy akory. Amin'izay lafiny izay dia heveriko fa manome fanampiana kely ihany koa ho an'ny tontolo iainana.
Iza amin'ireo fampiharana nataoko no tianao hanana na anananao ao amin'ny anao Fitaovana Android?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android ankafizin'i Cristina Torres
Natalia Bravo dia hoy izy:
Marihiko, ekeko tanteraka ny momba ny Fintonic, izay hany ananako amin'ireo zavatra 5 ilaina indrindra. Misafotofoto aho, tsy manam-potoana handraisana andraikitra amin'ny kaontiko. Ankehitriny dia mitarika ahy ny Fintonic ary manao tsara kokoa aho, voafehiko ny volako, laniko tsara kokoa, tsy misy tsy ampoizina tsy ampoizina, delestazy na adin-tsaina amin'ny faran'ny volana. Folo.
Valiny ho an'i Natalia Bravo
Ny sary voalohany amin'ny Samsung Galaxy Note 5 dia voasivana